Bhasikoro tswanda yembwa, takura chipfuyo chako zvakanaka uye zvakachengeteka | Imbwa dzeNyika
Bhasikiti tswanda yembwa, takura chipfuyo chako zvakanaka uye zvakachengeteka
Nat Cherry | | Imbwa zvishongedzo
Kune mafani ebhasikoro uye ecology, bhasikoro tswanda yembwa inogona kuve sarudzo huru kufamba pasina kusvibisa, nekukurumidza uye nekambani yepamusoro. Nekudaro, kutsvaga chigadzirwa chakakwana, kunyanya kana chakanyatsojeka, dzimwe nguva chinogona kunge chiri odyssey.
Nokudaro, Tevere tichataura nezve bhasikoro bhasiketi rembwa, uye pamusoro pekukupa iwe zvakanakisa zvaunogona kuwana paAmazon., takagadzirirawo mazano mashomanana, somuenzaniso, kuita kuti imbwa yako ishandiswe kutasva bhasikoro. Asi, kana chaunoda kufamba, tinokurudzira kuti utarise chinyorwa ichi ngoro dzakanakisisa dzembwa.
IWILCS Basket re...
Trixie Imbwa Dengu re...
Pecute Dog Carrier...
COFIT Bhasikiti Basket...
Cesta de Lona Bicicleta,...
1 yakanakisa bhasikoro tswanda yembwa
1.1 Dengu rinogoneka rakawanda
1.2 Nyore tswanda yembwa diki
1.3 Bhegi rakasimba renaironi
1.4 bhasikoro racks
1.5 kupeta bhasikoro tswanda
1.6 bhasiketi rinofema rakachipa
1.7 Dengu duku mune mavara maviri
2 Zviri pamutemo here kutora imbwa yako pabhasikoro?
3 Imbwa dzipi dzinogona kuchovha bhasikoro?
4 Nzira yekujairira imbwa yako bhasiketi rebhasikoro
5 kupi kutengerwa bhasikoro basket rembwa
yakanakisa bhasikoro tswanda yembwa
Dengu rinogoneka rakawanda
Kunyange zvazvo isina kunyatsogadzirirwa mhuka dzinovaraidza, chokwadi ndechekuti iyi tswanda yemabasa akawanda inozadzisa basa rayo zvakakwana. Yakagadzirwa neOxford jira, iro rinopesana netsvina uye riri nyore kwazvo kugeza (tauro rakanyorova rakakwana). Pamusoro pezvo, inopeteka uye ine mibato miviri yaunogona kusimudza kuitira kuti igone kushandiswa sebhasikiti kamwe chete kubva pabhasikoro, uye ine homwe nhatu: imwe kumberi uye mbiri pamativi, yekusimbisa kuti iwe ugone kutakura. zvimwe zvinhu. Huya nechivharo chemvura isingapindi mvura sechipo. Iwe unongofanira kutarisa kuti inopindirana nebhasikoro rako: ita shuwa kuti kureba pakati pemubato uye vhiri remberi ndeye 25 cm kana kupfuura.
Nyore tswanda yembwa diki
Docooler Canvas Basket...
Asi kana chaunoda iri modhi yakapfava isina zvinhu zvikuru asi inozadzisa basa rayo nemazvo, iyi tswanda yekupeta ndiyo yakanaka. Iyo inewo zvibato, kunyange munyaya iyi hazvina kuoma, asi sebhegi, uye chikamu chepamusoro chinogona kuvharwa netambo. Kunyangwe muromo wedengu wakagadzirwa nealuminium, imwe yakasara dhizaini iri semi-yakaomarara. Inotoshanda nekuigadzirisa kune mubato wescooter, uye yakanakira kutakura imbwa diki, kusvika kumakirogiramu mashanu.
Muchokwadi, imwe yemapoinzi inopesana nayo ndeyekuti nekufamba kwenguva, uye kana ukaitakura, dengu rinopedzisira rarasikirwa nekugadzikana uye rinopedzisira rarova vhiri remberi.
Bhegi rakasimba renaironi
Uye isu tichataura nezve kusimba nechigadzirwa chinotevera, imwe inodhura modhi, kuwedzera kwemutengo kunoruramiswa nekutsungirira kwayo kukuru uye maitiro. Zvechokwadi, tswanda inofanira kusungirirwa munzvimbo mbiri dzakasiyana, iyo inovimbisa kuti haisi kurasikirwa nekugadzikana kwenguva. Iyo modhi ine zvakawanda zvakawanda, semuenzaniso, ine mahomwe madiki akati wandei kuitira kuti ugone kutakura zvimwe zvinhu, uye mukati mayo ine tambo diki kuitira kuti ugone kubata imbwa yako zvirinani. Chekupedzisira, dengu rinogona kushandurwa kuita bhegi rinoshanda remitambo iro rinotouya netambo yaro kuitira kuti ugoritsveta papfudzi rako.
Petsfit Bicycle Mutakuri...
Bhasikiti rakanaka rebhasiketi rembwa iyi grey modhi maunogona kutakura mhuka dzinosvika 5 kilos. Iyo ine inotonhorera dhizaini yegrey uye ine fluorescent yero mutsara kuwedzera kuchengeteka mumugwagwa. Kufanana nemamwe mamodheru pane iyi rondedzero, paunoibvisa kubva pabhasikoro inoshandura kuita bhegi repafudzi. Iyo yemukati inonyanya kugadzikana, sezvo chigadziko chakapfava, uye chinotosanganisira tambo diki mukati kuti ubate imbwa yako. Iyi modhi yakarongedzerwa kushanya mabhasikoro, rangarira kutora zviyero zveese ari maviri bhasikoro uye chipfuyo chako kuti uve nechokwadi chekuti rinokwana.
kupeta bhasikoro tswanda
ANZOME Bhasikiti Basket...
Kunyange zvazvo isina chinhu chinoisiyanisa kubva kune mamwe maenzanisi, chokwadi ndechokuti iyi bhasikoro bhasiketi umo iwe unogona kutakura imbwa duku inoita zvainopikira: inoshanda uye yakangwara zvikuru. Iine aluminium mibato miviri kuitira kuti iwe ugone kuishandisa sebhasikiti rekutenga uye nyore kuiisa uye kuibvisa. Zvakare, kana iwe uchida bhasiketi asi iyo adapta yemubato yatsemuka, vanoitengesa zvakasiyana. Inowanikwa mumhando mbiri dzakasiyana, nhema uye ine muganhu webrown.
bhasiketi rinofema rakachipa
SNDMOR Basket re...
Yakanyanya, yakapusa modhi asi zvakare inobatsira zvakanyanya, kunyanya kana uchizotora imbwa yako pabhasikoro uye chiri chirimo., sezvo chimiro chayo chikuru ndechekuti inonyatso kufema, sezvo chikamu chemberi chiri mesh grid iyo kwete chete mhepo inopfuura, asi inogona kupa imbwa yako kuwedzera kuoneka. Inobata kusvika 4,5 kg uye inowanikwa nemavara matatu: turquoise, grey uye navy blue.
Dengu duku mune mavara maviri
COFIT Basket re...
Uye tinopedzisa neicho chingangove chidiki chidiki chemhando dzatinoona nhasi. Inowanikwa mumavara maviri, bhuruu uye tsvuku, uye iri nyore kwazvo uye inokurumidza kuunganidza., kunyangwe iwe uchafanirwa kuve nechokwadi chekuti bhasikoro rako rinoenderana kuitira kuti tswanda isarove vhiri uye imbwa yako yakachengeteka. Kune rimwe divi, iyi modhi, kunyangwe ichipokana uye isina mvura, ine yakaderera, uye ndeyekuti haisanganisi chero tambo yemukati kuchengetedza imbwa yako.
Zviri pamutemo here kutora imbwa yako pabhasikoro?
Parizvino hapana mutemo wakananga unokurambidza kutora imbwa yako pabhasikoro, kunyangwe paine zvishoma zvemutemo vacuum panyaya iyi. Chero zvazvingava, iwe unofanirwa kuona kuti nzendo ipfupi uye dzakachengeteka uye dzakagadzika sezvinobvira kuti chipfuyo chako chideredze njodzi uye, hongu, iwe unofanirwa kunyanya kutarisisa kune traffic traffic.
Imbwa dzipi dzinogona kuchovha bhasikoro?
Chokwadi ndechekuti hadzisi imbwa dzese dzinogona kunakidzwa nekukwira bhasikoro kwakanaka, uye kwete chete nokuti une mastiff isingakodzeri mubhasikiti: chokwadi ndechokuti kuoma kweasphalt kunogona kukuvadza majoini avo kana ari mukati mebhasikiti kana kumhanya pedyo newe. Nokudaro, zvakanakisisa kumirira kusvikira imbwa yako yakura zvakakwana kuti udzivise kukuvara uye kukuvara kwenguva refu. Izvi zvinowanzoitika mushure megore nehafu, kunyange zvichienderana, pakati pezvimwe zvinhu, parudzi.
Saizvozvowo, uye nokuda kwezvikonzero zvakafanana, Izvo zvakare hazvikurudzirwe kuti imbwa dzakura kwazvo dzikwire bhasikoro kana kumhanya pedyo nea. Chero zvazvingava, zviri nani kutaura nezvazvo kutanga nechiremba wemhuka kuti usatya.
Nzira yekujairira imbwa yako bhasiketi rebhasikoro
Iyo yakanakisa dhizaini yekuita kuti imbwa yako ijaire bhasiketi rebhasikoro kuti watenga nerudo rwakanyanya kwaari ndeye classic: kubva kushivirira uye kusimbiswa kwakanaka.
Kutanga, inojairira imbwa kunhuwa nekubata yedengu. Kuti uite izvi, siya kumba negumbeze kana cushion kana chitoyi chembwa yako kuti ijaire. Mupe mubairo pese paanoswedera pedyo kana kuti kunyange akapinda mudengu.
Kana iwe usingachaoni tswanda sechinhu chekunze. edza kuiisa pabhasikoro uye kuisa imbwa mukati. Kuti ucherechedze kunhuwa kwayo, siya cushion kana gumbeze mukati.Kuwedzera, inova yakasununguka. Rangarira kusimbisa maitiro avo nemubairo.
Edza kuita kuti kufamba kwekutanga kupfupi uye kurebesa nekufamba kwenguva. Uyezve, kutanga, tsvaga nzvimbo dzakanyarara, sezvo mugwagwa une motokari yakawanda inogona kukushungurudza uye basa rose rinoparara.
Paunenge uchichovha bhasikoro, chengeta maziso ane chiuru: kuwedzera kune traffic, tarisa kana kune imbwa dzisingazivikanwi zvakapoteredza izvo zvinogona kukonzera kugadzirisa mumbwa yako, pamwe nemakomba anogona kuikuvadza.
Pakupedzisira, zviri nani kuti panguva yekufamba imbwa yako inopfeka harness pachinzvimbo chetambo, saka iwe unogona kudzora zviri nani mafambiro ake mubhasikiti uye iye achave akasununguka.
kupi kutengerwa bhasikoro basket rembwa
Sezvo chiri chigadzirwa chakasarudzika, chokwadi ndechekuti hatigone kuwana bhasiketi rembwa kune chero kupi zvako, uye iwe unofanirwa kubheja pazvitoro zvine hunyanzvi, sezvatichaona pazasi:
En AmazonSenguva dzose, tinogona kuwana akawanda emhando dzakasiyana dzematengu kutora imbwa yedu pabhasikoro, nekuwedzera, yakatsanangurwa nevakawanda vashandisi, izvo zvinogona kukupa iwe yakaringana pfungwa yemhando yebhasiketi. Zvakare, kuve chinhu chakakura, yeAmazon inokurumidza kutumira sarudzo inonyanya kubatsira.
Chechipiri uye chekupedzisira (sezvo, sezvatareva, hachisi chinhu chinowanzoitika kutenga), mu specialized online zvitoro Vanewo zvakawanda zvinofadza zvikuru zvingasarudzwa. Kunyangwe ivo vachiwanzo kudhura zvishoma, chokwadi ndechekuti kuve nechiratidzo, hunhu hunoonekwa zvakare.
Imbwa bhasikoro tswanda isarudzo yakanaka kune avo vanoda kutenderera uye vanoda kutora chipfuyo chavo nacho. Tiudze, iwe nembwa yako munowanzo kuchovha bhasikoro pamwe chete here? Ndezvipi zviitiko zvawakasangana nazvo pakutakura nzira iyi yekufambisa uye chipfuwo chako? Iwe unokurudzira chero bhasiketi kunyanya?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa zvishongedzo » Bhasikiti tswanda yembwa, takura chipfuyo chako zvakanaka uye zvakachengeteka
Iwo akanakisa underpads embwa: zvaari uye maitiro ekuita kuti imbwa yako ijairirwe kwavari
Tambo dzekuruma imbwa: mhando dzakanakisa uye matipi